कमल थापाहरु धर्म-प्रचार गर्दै हिँड्ने, क्रिश्चियनलाई कोठाबाटै पक्राउ गर्ने ? – www.agnijwala.com
जुन घटनाले नेपाल लगायत एसियाली क्रिश्चियन समुदायमा एक किसिमको आतंक नै उत्पन्न भएको छ । तर एक साता नबित्दै नेपाल प्रहरीले दाङको घोराहीस्थित एक होटलमा बसिरहेका ५ जना क्रिश्चियन समुदायका मानिसलाई पक्राउ गरेको छ ।होटलको कोठामा बसिरहेको अवस्थामा ३ नेपाली सहित एक अमेरिकी र एक भारतीय नागरिकलाई पूर्व जानकारी विना नै पक्राउ गरेको छ । पक्राउ गर्नुको कारण थियो, धर्म प्रचार ।
खासमा एक अमुक व्यक्तिले सरकारको उजुरी संकलन गर्ने निकाय ‘हेलो सरकार’लाई टिपाएको उजुरीकै आधारमा उनीहरु पक्राउ परे । यथार्थमा उनीहरु होटलमै बसिरहेका थिए । उनीहरुको साथमा बाइबल चाहीँ थियो ।प्रमाण विना नै सरकारले कुनै अमुक व्यक्तिको उजुरीको आधारमा पक्राउ गर्नु आफैँमा पूर्वाग्रह देखिन्छ । जब कि, त्यो उजुरी रिसइबीका कारण थियो भनी निकटस्थहरु बताउँछन् ।
उनीहरुको साथमा बाइबल हुनु भन्दा अन्य कुनै प्रमाण प्रहरीले भेटाएको छैन । अचम्म त के भने, कुनै क्रिश्चियनसँग बाइबल हुनु अस्वभाविक कहाँ हो र ? हिन्दुको साथमा गीता वा वेद भए झैँ क्रिश्चियनसँग बाइबल हुनु नै पक्राउको कारण हुनु त गैरकानूनी तरिका हो ।जब कि, तीमध्ये एक अमेरिकी महिलाले बिजनेस भिजाको लागि आवेदन दिएको अवस्था थियो । र उद्योग विभागबाट सिफारिस पनि भइसकेको थियो । फौजदारी अपराध संहिता २०७४ अनुसार कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो को उद्योग वा दुरुत्सहन दिनु हुँदैन भनिएको छ । तर होटलको कोठामा आफ्नै साथीहरुसँग बसेको व्यक्तिले कसरी धर्म परिवर्तन गराएको हुन्छ ?
यस्तै कसैले कसैको धर्ममा खलल पार्न हुँदैन भनिएको छ । यदी यसो हो भने, केही दिनअघि मात्रै काठमाडौंकै यलम्बर पार्टी प्यालेसमा क्रिश्चियनले कार्यक्रम गर्न खोज्दा शिव सेनाका ‘गुण्डा’हरु आएर कार्यक्रम नै रोक्न लगाए र खलल पुर्याएका थिए । तर राज्यले केही कदम चाल्न सकेन । उता दाङमा भने प्रहरीले पक्राउ गरेको तरिका नै गैरकानूनी छ ।उता नेता कमल थापाले देशव्यापी हिन्दुधर्मको प्रचार गरिरहेका छन् । सरकार उनलाई सुरक्षा नै दिइरहेको छ । यो त सरासर कानून विपरित हो नि ! श्रीलंकामा भएको घटनाको पीडा नसेलाउँदै यता नेपाल सरकार यस्ता साना तर संवेदनशील घटनामा गम्भीर नबन्दा यसको असर र क्षति भयावह पनि हुनसक्छ । सरकारकै लापरवाहीका कारण नेपालमै धार्मिक सहिष्णुता खलबलिन सक्ने छ ।
राज्य र समाजकै पूर्वाग्रही सोचका कारण अर्को अतिवादी बिचार ननिस्किएला भन्न सकिँदैन । सरकारले यस्ता कारवाहीमा सन्तुलित भएर सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित गर्नुपर्छ । धार्मिक सहिष्णुता कायम गराउनु आवस्यक छ । अन्यथा, क्रिश्चियन समुदायका युवाहरु पनि देशभर कमल थापा र त्यस्तै राप्रपाका नेताहरु झैँ देशव्यापी धार्मिक राज्यको प्रचार गर्दै क्रिश्चियनको प्रचारमा उत्रिए भने कस्तो होला ?सरकारले धर्मको नाममा भएका कुनै पनि अतिवादी सोच फैलन दिनु हुँदैन । यो शान्त समाजमा कुनै पनि अतिवादी धार्मिक समूहले गर्ने गतिविधिमा राज्यको सन्तुलित र विवेकपूर्ण व्यवहार आवस्यक छ ।
(घिसिङ क्रिश्चियन समुदायका अगुवा तथा कानून व्यवसायी हुन् ।)
साभार- अन्नपूर्ण पोस्टबाट